Barnaamijyada Maalgelinta Mulkiilaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Barnaamijyada Maalgelinta Mulkiilaha
Maaddaama mugga dalabku badan yahay ee barnaamij kasta, jawaabaha dalabku dib ayey u dhici karaan dhowr maalmood, mana dhici karto in lacag-bixinnada la helo bilo badan. Sheegashooyinka waxaa loo bixiyaa sida ay u kala horeeyaan, ka dibna loo ansaxiyo. E-maylka oggolaanshuhu waa dammaanaddaada bixinta. Fadlan hubso inaad ku darto emayllada @ commerce.wa.gov liistada dirahaaga aaminka ah.
Barnaamijyada Yaraynta Mulkiilaha
Ku soo dhowow bogga degitaanka ee Barnaamijyada Yaraynta Mulkiilaha. Fadlan dooro oo guji cinwaanka barnaamijka hoose si aad wax badan uga barato.
Barnaamijka Gargaarka Burburka Mulkiilaha
Mulkiileyaasha guryaha waxay heli karaan ilaa $ 5,000 wixii dayactir ah oo ay sameeyeen waxyeelada kireyste kabis ah iyo ilaa $ 1,000 oo lagu daray ilaa 14 maalmood oo kiro lumis ah si loogu sameeyo dayactirka looga baahan yahay inuu ku maro kormeerka HQS ee kabista.
Kireystaha waa inuu helaa kabid kiro ah.
Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga
Barnaamijka Kireysiga Kireystaha wuxuu siiyaa kireystayaasha deyn aan dulsaar lahayn oo maxkamaddu oggolaatay si ay ugu qanciso xukunka lagu xukumay milkiilaha inta lagu jiro ka saarista bixinta kirada oo aan bixin iyo illaa seddex bilood oo kirooyin mustaqbalka ah.
Kiraystaha waa in laga helaa dakhli hoose, awood yar, ama dhibaato ku ah maxkamada inta lagu jiro ka saarida bixinta kirada oo la sii haysto iyo kireysiga.
Barnaamijyada Gargaarka Guryaha ee Mulkiilaha ah
Mulkiileyaasha guryaha waxay heli karaan ilaa $ 15,000 oo kiro ah oo aan la bixin laga bilaabo Maarso 1, 2020, illaa Disember 31, 2021.
Kiraystaha waa inuu lahaadaa midkood:
Loogu tala galay qorshaha dib u bixinta, ama
Faaruqisay qolkii la kiraystay iyadoo aan amar maxkamadeed laga saarin
Barnaamijka Gargaarka Mulkiile Xaddidan
Milkiilayaasha guryaha ee dakhligoodu hooseeyo waxay heli karaan ilaa 80% kirada aan la bixin laga bilaabo Maarso 1, 2020, illaa Disember 31, 2021.
Mulkiiluhu waa inuu:
Noqo mid dakhligiisu hooseeyo
Kali noqo mulkiilaha guriga
Lahaansho afar ama wax kayar
Ogsoonow: Codsiyada waxaa la bixiyaa iyadoo lagu saleynayo taariikhda iyo waqtiga la helay lana oggolaaday. Ganacsigu wuxuu bixin doonaa oo keliya sheegashooyinka markii la heli karo ilo.